Ady! Fanafihana any Etazonia ny toby amerikana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ady! Fanafihana any Etazonia ny toby amerikana
Nanafika ny toby amerikana tamin'ny alàlan'ny balafomanga balista i Iran. Al Asad Airbase ary i Erbil avaratra Irak Ny tafika amerikana dia notafihin'i Iran.
Ny toby Al-Asad dia voalaza fa voan'ny balafomanga marobe. Tsy fantatra mazava raha nisy ny maty.
Iran Press TV nilaza hoe: Nikendry ny tobin'ny seranam-piaramanidin'i Ain al-Assad any amin'ny faritanin'i Anbar any andrefan'i Irak ny Corps mpiambina ny revolisiona Islamika (IRGC) taorian'ny nanaovany voady hanome valifaty ny famonoana amerikana ny komandà mahery vaika amin'ny ady amin'ny fampihorohoroana, Lt. Gen. Qassem Soleimani.
Nitranga izany taorian'ny namonoan'ny komandy Iraniana ambony Qasem Soleimani tamina fitokonan'ny fiaramanidina tany Baghdad ny zoma, noho ny baikon'ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump.
Nandrahona ny “valifaty henjana” i Iran noho ny fahafatesan'i Soleimani.
Iran dia nandefa balafomanga balafomanga 12 farafahakeliny XNUMX tao amin'ny Airbase Ain-Assad any Irak afovoany. Ny miaramila dia miaramila amerikana sy irak. Ity horonantsary ity dia voalaza fa minitra vitsy lasa izay ary mampiseho ireo balafomanga eny amin'ny lanitra. (Video)
Ny rafi-piarovana amerikana amerikana tao Erbil dia nanapotika balafomanga ballistic marobe izay nikendry an'i Ain Airbase Al Asad ao Anbar.
Hoy ny bitsika iray: “Iran niandry ny tafikay hanomboka hisintaka alohan'ny hanafihana tokony ho 20 minitra lasa teo Airbase Al Asad any Iràka. Ny tsaho dia farafaharatsiny 20 no maty tamin'ilay fanafihana. Na tsy nisy aza ny maty dia tsy voavaly izany. ”
Ny kandidà ho filoham-pirenena demokratika Joe Biden dia nilaza ny talata teo fa ny firongatry ny fifandirana misy eo amin'i Iran dia manaporofo azy fa "tsy mahay mampidi-doza" ary mametraka an'i Etazonia ho eo an-tsisin'ny ady.
Raha niresaka tany New York i Biden dia nilaza i Trump fa nampiasa ny fanapaha-kevitra "tsy mahomby" handidiana ny famonoana ny jeneraly Qassem Soleimani Iraniana ary tsy nahavita nampita ny antony tamin'ny Kongresy na ireo mpiara-dia amin'i Etazonia manerantany. Nilaza i Biden fa i Trump kosa nanolotra "bitsika, fandrahonana ary fikomiana" izay manaporofo ny filohan'ny Repoblika ho "tsy mahay mampidi-doza ary tsy mahay mitondra an'izao tontolo izao."
Tsy misy maninona ny fizahan-tany raha tsy mikoropaka ny olona taorian'ny fanafihan'i Iran an'i Etazonia
Carnival hanangana sambo fitsangantsanganana efatra vaovao amin'ny 2020